Coulda Kwakandiwanisa Me Lyrics — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akaita kutonga saIye, ivo vanofunga isu vanoshayiwa fiends
Ndakanga ndisipo vakati akapfura panguva murume
Handigoni kugadzirisa nyaya, havazogari kuti ini
Asi ndinoziva upenyu sezvo jaya dema
Ndinofunga handigoni kuva anopenga vamwe havanzwisisi
Asi pamwe iwe wakaramba
Kana wakatarisa hwangu uye imi akamira apo ndakamira
Shandisa maziso angu kuti ndione zvinhu mumigwagwa
Zviri chairo kana ndava kuda coulda ini ndanga
Fungidzira kwandiri somunhu kuyaruka
Kunhonga panze inonwa kuchitoro kana ndaona
The keshiya akanditarisa, ipapo anozhambatata
Anonongedza kuruoko rwangu hudyu uye yakandiudza ndiri kuona
Asi kusimudzira, Handina kuziva kuti ndaiva kuti kutyisa
Uye ini handizivi kuti ndaigona kupfura iwe ane Blackberry
Very shamisa, kuti akaona ini somunhu thug
Kana ndisina kumbobvira yabatwa nyaya, kumbobvira vakaba neunotengwa zvinodhaka
Kana sei Kumbonetswa nguva ini nendege kushamisira
Azere nomufaro, finna Rap nokuti kamuri izere vabereki
Kunze ipapo ndinowana kuti pfuti kumeso
Chani pamaoko angu, Pat pasi muchiuno
Ndozvazvakaitawo ol, chete ol
Ini kukodzera tsananguro tsotsi kuti vanoziva
Vakandiratidza mufananidzo, handeyi nazvo
Uri kidding? Hatidi kutarira munhu akafanana
Zvakanaka kuti cops vakafunga zvatakamuitira kana muchitsvaka zvakanaka
murume wose mutema ndinoziva
Got nyaya sevaya, vachicheka zvavanenge ari kudyara
Vakati kufunga uve thug kubva kusvetuka
It regai basa kana imi akasungirirawo ane pombi
Tarirai Handizivi kana Mike Brown aiva maoko ake mudenga
Asi ndiri kunyora vachiti homie I'ma zvinosimuka
Uye I'ma kukuudzai Ndinonzwa ndinotarisa idzi mumigwagwa
Uye vanoti chechokwadi kana ndava kuda coulda ini ndanga
Denga uchinzwa pfumbu, meso tsvuku
Black uye chena rwisana, makore pamusoro musoro
Rinhiko kusvikira vanzwa chii takati
Rinhiko kusvikira kunzwa chii Ndikati?
Danidzirai panze vose zvakanaka cops
Kurwisa vakomana zvakaipa, kuita Kumira zvakanaka
Ndinovenga kuti pamusoro Hood zvinogumbura
Pakupedzisira kwavo vangaedza bundu penyu zvose mbavha
I Wanna ndinoti kumajaya angu ose matema
Ndinoziva zviri achifunga isu chete havagoni kuwana
Asi kutsamwa kwenyu kutadza
Regai kutaura zvavari kufunga
Musarega munhu inotiudzei isu haisi akamuka ukoshi
Vamwe achaedza isu dzima hazvishandi
Ndinoziva hazvisi zvakanaka, asi tinoziva kuti iye ane hanya
Zvino rimwe zuva ndichaenda kupukuta misodzi
Apo tariro yako zviri pa? Mine uri maari
Where tariro yako pana? Mine uri maari
Takasvika kushanda kuita, asi tariro yangu iri maari
Vakazozvinzwisisa basa rokuita zvakare, asi tariro yangu iri maari
Taurai: Coulda Me Kwakandiwanisa — Trip LEE
Jodhani • Zvita 4, 2014 pa 12:53 ndiri • pindura
Ndinoona vamwe pfungwa ravakwa Lyrics, uye ndinoziva rwiyo urwu ndiko pachako, asi anonzwa sokuti zviri rwiyo zviri kupa kuti mhirizhonga iyi.
chikamu wechipiri 3rd ndima, kutaura pokunge patted pasi nokuti “kufufutirwa” tsananguro nemutadzi. Ndanga patted pasi pamberi, uri parutivi Interstate pashure pokunge akadanidzira kuti 3 zvemakiromita, nekuti ini akapfeka áfrica uye Sweatshirt kuti Wandiita akafanana ndakanga kubva achityisa divi reguta. Kwete kuti, asi ndakanga kutyaira Vanasekuru vangu Impala nababa vangu mufambi chigaro, uye achiongorora nyaya dzedu nezvedu vakananga shure kubva veko Apple chitoro apo Ndakasiya kure Macbook wangu kuti ngadzirambe. Kumutumidza vafambi, kumutumidza chero, asi zvakanga chinhu asi ruvara rweganda rangu. Mumwe mupurisa aiva chena, mumwe aiva mutema. Izvozvo ini.
mutsetse nezvendima wokutanga: “Ko munhu Wanna kunzwa marwadzo edu”. Pretty chokwadi ndinoziva zvazvinoreva. shoko “yedu” kuti mashoko, kwandiri sokuti Kupfururira rwiyo, wakafanana handidi kunzwisisa kuti hondo iri, kana manzwiro aunoita. Ndirege kukwanisa kunzwisisa, asi Mwari akandipa nzira kutsigira, kuburikidza Prayer.
Kupfuurira kuti pfungwa, “Tose vakaitwa nomufananidzo waMwari munoziva”. Pane yose pakaunda kuti rwiyo. Mwari akatisika nomufananidzo wake, uye hapana ruvara, kuremara, chechikadzi kana kwakabva rudzi ndamboita Mwari Kutarira munhu Akasika chero zvakasiyana, saka nei isu? Nei ndichifanira kutarira pachangu chero zvakasiyana iwe, ndiEzekieri?
Ndaigona kuwana zvimwe, asi ndinofunga ndakati zvakakwana. rwendo, somuteveri waKristu Tichafukei kutenda kwedu, hatitsvaki chero munhu upi zvakasiyana kana kuzvisiyanisa. We kurasa Self, uye kuisa akaisa pfungwa paari, uye pasinei mumwe wedu anonzwa, kana tichiti tiri vaKristu, nzira tinenge uye zvinhu tinoti kuratidza sei vanhu kuMuona kuburikidza nesu. Saka kana aigona kunge iwe, Ndinofanira akutongei zvakasiyana? Ko dai ini?
pfungwa yangu, kuva “Colorblind” munyika ino.
yakaoma • Zvita 4, 2014 pa 10:13 ndiri • pindura
hama Jordan, ndinogona chete kuratidza kuti “colorblindness” haisi mhinduro nyaya idzi? Regai chinja nokukurumidza kubva nhangemutange kusvikira chechikadzi. Varume nevakadzi zvakasiyana chaizvo, uye kuti chinhu chakanaka! Kuva “anorwira bofu” Zvaizova nezvakwakaipira chaizvo, nokuti izvi zvinongorevawo akagura kukosha kusiyana kwedu, uye kutiita kurasikirwa Mwari. Zvandinoreva kuti ndechokuti sezvo vanhu, tsitsi ruchigona kuuya sezvo sezvingatarisirwa sezvo anoita vakadzi (cherechedzai shoko ruchigona!). Kana isu chete akatarisa vanhu, tingadai ndokurasikirwa tsitsi dzaMwari. Tingadai verenga nezvazvo, asi ona hapana zvaioneka, muenzaniso munhu tsitsi dzake (Ndiri kuziva zvandiri kutaura hasha zvawo, asi chete kuti pfungwa).
Race ndiro nzira. Tiri chaizvoizvo zvakasiyana chaizvo, zvinotarisirwa! Blacks, vokuAsia, nevachena, vaitaura chiHispanic, tiri kazhinji chaizvo zvakasiyana nemaonero edu, unhu, tsika nemagariro, nezvimwewo. Ichi chinhu chakanaka. Nokutarisa imwe tsika chido pamusoro perimwe, tinogona kuona kuti Mwari ndiMwari vaneshungu (vaneshungu pamusoro zvakarurama zvinhu). Nokutarira tsika imwe “anononoka kutsamwa(ra),” tinogona kuona kuti Mwari ndiye murefu nesu, uye anononoka kutsamwa. Nokutarira dzakasiyana, isu mova kuona mifananidzo Mwari zhinji.
pasina mubvunzo, tiri tose kubatwa zvakafanana, nekuti tiri tose vakasikwa Imago Dei. zvisinei, tiri zvakasiyana, uye izvozvo zvakanaka! Ndiri hafu nhema, hafu chena, uye une tani kuti “Black maitiro,” uye “chena unhu.” Zvakanaka. Zvikuru izvo! Tinovimba vanoratidza kwatiri chinhu nezvaMwari! I vanovhotera kupemberera uye kudzidza kusiyana pane colorblindness, uye mhemberero wechokwadi kunogona kuitika chete muvhangeri.
Nate • Zvita 6, 2014 pa 2:45 pm • pindura
Mashoko ako ini akafuridzirwa kunyora rwiyo vachishandisa nzira mashoko ako: “zvose tiri vakasikwa Imago Dei, zvisinei, tiri zvakasiyana uye kuti zvinopfuura OK”. Ndinokutendai yako kutaura ugomutsa uchenjeri. The vamwe rwiyo yachinja kuti kuratidza pacharo sezvo setsikawo chipo kukodzera mashoko kubatana kwedu kusiyana uye muna Kristu.
Grace uye Peace,
Nate • Zvita 6, 2014 pa 2:46 pm • pindura
Ndine hurombo….*yakaoma *….kwete Tori.
denga-soro • Zvita 4, 2014 pa 10:53 ndiri • pindura
Zvakanaka akati Jordan. Ndichati ichi chimwe chinhu: Pane colorblind, aigona isu pachinzvimbo kuona kwedu vemadzinza akasiyana-siyana sezvo Mwari okugadzira zvinhu? Tinomira pamwe naye pasi zita raJesu. Ndiye mureza wedu – zvisinei kana tiri kubva Ferguson, Cali, Oregon, Alabama kana New York. Jesu ndiye yedu rainyanya kukosha. Uye mutsika kuti anoda tiparadzanisa kupinda “vashoma” uye mapoka akasiyana, isu mira sezvo muviri waKristu, pasi Him.
Asi ndinoita kunzwisisa njere dzako pamusoro rwiyo. Tinokutenda kuvaka Umambo nokuda kubwinya kwake!
Josh • Kukadzi 2, 2015 pa 1:09 pm • pindura
rwendo, ngaavongwe nokuti pfungwa idzi. Ndinoonga kuudzawo wako zvakaitika kwauri somunhu ruvara anofunga yokuzivikanwa ake uye njodzi ezvinhu mutsika dzedu kuburikidza neLens Vhangeri. Dai Ishe uchiwedzera Umambo hwake uye mukurumbira kuburikidza nebasa rako. Ndatenda.
Gabriel • Zvita 4, 2014 pa 2:13 ndiri • pindura
Mazvita Trip, iwe uri wechokwadi anoyemurika uye kurudziro. Ramba wakadaro rakanaka uye kuzendamira nenhungamiro kwaJehovha.
Michael • Zvita 4, 2014 pa 5:17 ndiri • pindura
Chiri saddening kuverenga zviitiko zvose kuenda zvino munyika. Kodzero kubva NYC kuKenya. Painfull nyaya asi hatina kudzidza kubva kwavari uye rambai muchivaitirawo saizvozvo zvinhu. Ndiyo nguva isu zvechokwadi akazova hama dzedu vachengeti
Michael • Zvita 4, 2014 pa 6:01 ndiri • pindura
Trip Lee, ichi ndisina kuuya panguva yakasiyana. Tinofanira kusimbisa pfungwa zvikuru uye zvose zvinoreva #couldabeenme
Cristella • Zvita 4, 2014 pa 6:05 ndiri • pindura
Ndinokutendai rwendo nokuda Blog pambiru uye Mwanakomana
Richard • Zvita 4, 2014 pa 7:37 ndiri • pindura
Chokwadi chinorwadza kunzwa, achiri haagoni here kufungidzira sei y'all kunzwa asi ndinoona kuti yakawanda ppl vatema chete kuwana chete here kutsanya… kusuwa pamusoro nepfambi unto, Ndinonzwa simba zvachose…
Richard • Zvita 4, 2014 pa 7:38 ndiri • pindura
*chete = kutongwa
Todd • Zvita 4, 2014 pa 7:48 ndiri • pindura
mashoko, zvakanaka zvarakagadzirirwa. Kwakaunza makore meso angu kana ini muduku yaaitarisira. Ini chete ichangobva kuwanikwa mumhanzi wenyu uye yava zvinoshamisa kurudziro kuwana panguva muupenyu hwangu Mwari akaona izvozvo. Zvakawanda dzokurumbidza, hama yechiduku.
Louis • Zvita 4, 2014 pa 8:09 ndiri • pindura
Uyu chiwanikwa chaiyo, rwendo.
Kishi • Zvita 4, 2014 pa 8:14 ndiri • pindura
Love rwiyo urwu! Tariro yangu iri KWAARI zvakare!! Tibatsirei BABA!!!
Taurai: New Music: Trip Lee – “Coulda Me Kwakandiwanisa” |
Robert • Zvita 4, 2014 pa 9:42 ndiri • pindura
Vimba naMwari uye Rambai Muchiita Trip Good! Chiedza chenyu ngachivheneke.
Amanda • Zvita 4, 2014 pa 12:51 pm • pindura
Kutaura kuti Mwari haaoni ruvara iri unBiblical. (Jodhani) The Bible rinoti Mwari akasika marudzi akasiyana uye nendimi kuti showcase koumambo hwake. Hatifaniri kunyepedzera kuti haapo! Kana ukati unoda kuva ikoko mutendi uyo unotaura zvinhu nokunyengetera kana chero nzira zvino nei muri kuedza nharo rwiyo rwake? Ari kuudzawo kurwadziwa. marwadzo ake. Stuff kuti vanhu vatema, pindana ne. Ko kunzwa akaparadzaniswa kwaari vachiti. Nei ONE muenzaniso wako ane ruzivo zvakaipa kutonga panze kana aizoita kurwadziwa uye kushungurudzika vanhu vakawanda vatema vanotarisana zuva nezuva. Kwete izvozvo chete nguva. murume wangu nguva dzose kupfuura kuti chokwadi unouya kure sezvo asiri richikwidibira vanhu!! Sei? Nei ari mutema saka vaiona kutyisa uye kutyisidzira. Nei achitaura zvakajeka kuti vanhu vanofunga vanofanira kugadzira mashoko, Iii hamusi chii Ndaifunga, kana iwe usiri kufanana nevamwe vanhu vatema. Ita vanhu kukwira newe uye vari kushamiswa aunoita? Rega kuti Maminitsi uye kunzwa vanhu, haufaniri kubvumirana kana kunzwisisa. Just kuratidza vamwe tsitsi uye kubatsira kuva chikamu chemhinduro! Thanks yokuitawo mwoyo wako Trip Lee.
Abigail • Zvita 4, 2014 pa 1:28 pm • pindura
rwendo, izvi zvakanaka.
moyo wangu kukuvadza nekuti pachine chikonzero kunyora nziyo seizvi. Pane achiri kurwa kuti upenyu vatema.
Pamwe chete zuva tinogona kuita zvakanaka.
chido • Zvita 4, 2014 pa 2:44 pm • pindura
Kuramba zvakanaka basa Trip! Mashoko ako uye chapupu yenyu simba! Dai Ishe vakuropafadzei, chengeta iwe, kuti chiso chake chipenye pamusoro pako!
Tyrone • Zvita 4, 2014 pa 3:45 pm • pindura
Charlotte • Zvita 4, 2014 pa 4:25 pm • pindura
Trip Lee murume,
Ndingava wabvunza kuti ini yakura kuda chikuru nderechokwadi nenzwi rako?! Ahh zviri saka mbishi uye chaivo! Uyu Feat huru. BRO. Chokwadi, Ndiri akarwadziwa chaizvo kunzwa pamusoro ose uori iro rave kuratidzwa pano mumhepo uye anopenga sei kusasarura uye zvachose pasi ino zvinogona – Ndine mwoyo chaizvo rwangu dzinza iro rave stereotyped uye broadcasted pamusoro. Vhidhiyo kubva kuBrooklyn NY ndiyo chimwe chezvinhu saddening zvinhu chandakaona munguva refu.
Victoria • Zvita 4, 2014 pa 4:28 pm • pindura
Ndinoda kuti Jordan ari. Ini pachangu ndiri America mutema, mukadzi, asi maonero andaiita, chechikadzi asina kutamba chihombe basa, mukadzi mutema inogona nangananga mune discriminatory nzira zvakare. Handina kumbobvira zvakanangwa pachake nokuda ruvara rweganda rangu, asi ndinofarira kufunga ndinoda kumbobvira vanovenga kana dai zvinhu zvakaipa munhu aiva kundikuvadza kana kuuraya kwandiri ezvinhu akafanana ndivo tiri kutaura pamusoro. Kuva muKristu, Ndiri vachiyeuchidzwa ndima apo Jesu anotiudza kuti adzorere rimwe dama. Kana munhu ichikuvengai, munovada pasinei kuti. Rusaruraganda hauzombomiri zvichiitika, asi kana munhu akaitema iwe, adzorere rimwe dama. Haugoni kuita munhu kugamuchira iwe, zvinhu zvakadai haasi kuenda kumisa. Asi tinofanira kurega kufunga kuti vatema ndivo chete rudzi zvakanangwa. Musiyano chete, chena iri mhosva dema ndiyo chete mhosva kurerwa munhau. Zvakadini chena mukomana yokuuraya munhu Hispanic? Kana Asian yokuuraya dema? zvose takasikwa zvakafanana. Ehe, paiva nguva apo uranda akanga dema vanhu vose vaiziva, asi nhasi pane uranda uye rusaruraganda kuitika pakati rudzi ose. Mwari haaoni kufa varume ava nhema chinhu zvakasiyana pane anoona rufu munhu. Ndinofunga tiri kukanganwa kuti pfungwa, upenyu hapana hwomunhu chinokosha kupfuura chimwe. Uye ngati zvakare kukanganwa kuti isu here hatizivi chaiwo zvinhu mhosva idzi. rwendo, Handisi muchivenga pamusoro rwiyo wako zvachose, zviri zvikuru kuti munhu wose ane pfungwa dzavo uye ichi ndeyako. kunyange zvazvo, Ndichati, hongu yaigona kunge iwe, asiwo aigona kunge murume chena. Us vanhu vatema Havasi chete vanonangwa. Ngatiedzei kuona mumwe nzira Mwari anoona kuti, 100 muzana wakaenzana.
Danielle • Zvita 4, 2014 pa 10:02 pm • pindura
Somunhu biracial, Color bofu(Ehe, nekuti nhaka yangu uye netsika zvinosanganisira vemarudzi akasiyana zvakawanda kutanga kutaura imwe panguva. I kuapemberera hapana zvishoma) mukadzi handigoni kufungidzira chinhu kuti munhu mutema chinoenda kuburikidza. Kunyanya apo vanhu kusvetukira uchinanga rudzi uye kusiya Mwari vabvemo. Asi ndiri kufara kuti iwe kuisa Mwari mairi kwaakanga ndezvaiye. Iye runobva mumamiriro ezvinhu, Iye runobva sezvo Justice nemupi. Tiri uye kuvimba naye.
Ryan • Zvita 4, 2014 pa 10:49 pm • pindura
Anthony • Zvita 7, 2014 pa 10:20 pm • pindura
Ndairidza rwiyo urwu kuti kamuri izere vanhu vachiedza kunzwa hama dzavo nehanzvadzi unoshevedzera zuro. Panga pamusoro 18 zvedu uye 6/8 vakanga chena. Mashoko enyu atadze zvinhu.
Ziva kuti mashoko enyu kusvika vanhu zvakadzama, nzira yakanaka. Ndinokutendai akatendeseka kwenyu chadzera.
Johnny • Nyamavhuvhu 13, 2015 pa 7:36 pm • pindura
Kana uri kuita izvi pamusoro pachako kana pamusoro yakananga rudzi zvino ine chokuita naMwari. rwiyo Your chete zvinoratidza kuti nei rusaruraganda nyaya inopfuurira nzira anoita nekuti hapana anoda kushandura kutenderera chete kuchema sei vari kubatwa zvisina kutsarukana chena, Mexican, zvechiAsia, vanhu vanofa chete nzira dzose nguva nokuita mhosva uye akamira nemunhu isu vakabvuma kuva mudziviriri. Your kana kururamisira zvachose kana iwe usiri hakuna mitsetse yakanaka kana zvikonzero. You vakakwira kutya uye hasha, Gods kwete avo asi ukasarudza kuva. Iwe isa Mwari ichi saka d chete saka vaKristu vanoramba vachiteerera iwe asi zvino kuita zvakarurama kutsigira Mwari pachinzvimbo chako mashoko edu vanoti gonna wako ndokumukirazve rusaruraganda kuti kuenda kwenyu kuti tis rwiyo pamusoro rusaruraganda uye kwete Mwari. Haugoni kuruoko 2 matafura iwe kana kugara patafura kana Baba kana iwe ugere patafura vafa. Chero nzira waita wakafirwa feni. Ndinovimba unogona kuuya mashoko nokutya wako uye uone sei nyore kuremekedza aizochinja atye yakagovana ruremekedzo uye kushanda pamwe chete. Kana coulda kunge iwe, ipapo pamwe unofanira uongorore zvakare hwako sarudzo.
Jon • Nyamavhuvhu 17, 2015 pa 12:00 ndiri • pindura
Haasi kurwisa cops zvakanaka? Handifungi. Ndinoda rwendo uye haagoni kumirira kusvikira ake raitevera Album, pose kuti pamwe. rwiyo Great.
Taurai: 257 || Dear Trip Lee, Ndakunzwa – putswa Magazine
Kianna • Chivabvu 20, 2016 pa 4:30 pm • pindura
Ini chete ateerera rwiyo urwu uye mashoko acho simba. “Apo tariro yako zviri pa?” -Trip Lee. ndazvifarira!
maka • Mbudzi 21, 2016 pa 6:43 pm • pindura
Kuita hama dzangu dzose, hanzvadzi, mwoyo, uye kukuvadza. Ndine hurombo. Ndiri chikamu ichi sechinhu American. Asi ndiri kuteerera. I kunzwa marwadzo enyu.
Shoko Achibuda. No uchitsoropodzwa, rudo chete.
Agen Slot • Kurume 23, 2018 pa 7:02 pm • pindura
Mhoro! Ndinoziva izvi mhando kure-musoro asi ini
aifanira kukumbira. Anoita kuvaka tsime hwakasimbiswa Blog akaita seenyu zvinoda hombe mari
basa? Ini ndiri zvitsva Blogging zvisinei ini kunyora dhayari rangu zuva nezuva.
Ndinoda kutanga Blog saka ndinogona kugoverana yangu ruzivo
uye manzwiro paIndaneti. Ndapota itai kuti ndizive kana muine
kurumbidza kana mazano itsva vanoda Blog varidzi.